Teknolojia niomerika : tonga eto amintsika ny delegasion’ny Icann | NewsMada
Teknolojia niomerika : tonga eto amintsika ny delegasion’ny Icann
Tonga eto amintsika ny delegasiona avy amin’ny Icann. Antondian’izy ireo ny hampiroborobo ny teknolojia niomerika aty Afrika ny votoatin’ny asan’ny Icann eto Madagasikara. Tanjona ny hampivelatra ny tsenan’ny niomerika amin’ity sehatra ity ary handraisan’ny mpisehatra isan-tsokajiny anjara. Anisan’ireo firenena hanatanteraka ity paikady ity i Madagasikara, nanao sonia ny fifanarahana miompana amin’ny fiarovana ny anarana manokana famantarana isaky ny firenena (.mg Madagascar). Nihaona tamin’ireo mpisehatra voakasika samihafa i Yaovi Atojoun, miandraikitra ny fanatanterahana ny Icann, nanomboka ny 18 hatramin’ny 20 septambra teo.
Famantarana an’i Madagasikara “.mg”
Nohazavain’ny minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny niomerika (MPTDN), Rakotomamonjy Neypatraiky, tamin’ny antsipiriany fiaraha-miasa azo ataon’ny roa tonta. Ao anatin’izany ny tetikasa DNSSEC*, mikasika ny famantarana ny firenena malagasy “.mg”. Eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao manoloana ny heloka amin’ny internet (cybercriminalité), ny fandikan-dalàna amin’ny internet. Efa an-dalana avokoa ny fanatanterahana ireo voalaza ireo. Naneho ny fahavonona amin’ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miombon’antoka hatrany ny minisitra hampiroboroboana ny niomerika eto amintsika.
Etsy ankilany, niaiky i Yaovi Atohoun fa mety tsara hampiroboroboana ny Icann ny tontolon’ny internet eto Madagasikara. Tsapany koa fa manara-maso akaiky ny fivoaran’ity sehatra ity ny MPTDN ary tena tafiditra ao anatin’ny sehatra. Azo antenaina ny hisin’ny fiaraha-miombon’antoka bebe kokoa.